We Fight We Win. -- " More than Media ": မီး မရှိ တဲ့ပြသနာ ကြီးထွား လာနေပြီ ။ အမတ် ၄၃ ယောက် ဘယ်ကို ရောက်နေသနည်း
မီး မရှိ တဲ့ပြသနာ ကြီးထွား လာနေပြီ ။ အမတ် ၄၃ ယောက် ဘယ်ကို ရောက်နေသနည်း
၂၄ နာရီ မီးရရှိရေး ဒို့ အရေး။ ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားများ ရေမရှိလို့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတခါလှုပ်ရှားမှုက ခေါင်းဆောင်မရှိပဲ ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်လာကြရပုံ
ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်းခံနိင်မှုကုန် ခန်း စပြုလာနေပြီ လား။
အစိုးရက ရေနဲ့ မီး နဲ့ လုံးဝ ဖြေရှင်းပေးနိင်တဲ့အနေထားမှာမရှိတော့ပါဘူး။ အစုိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နေပါပြီ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေက သူတို့ အတွက် ဘာအဓိပယ်မှ မရှိ
ဘူးဆိုတာ သူတို့သိနေကြတယ်။ သူတို့ ရဲ့အသံတွေ ကို ၂၄ နစ် လုံးလုံး ကျိတ်မှိတ်သည်းခံထားခဲ့ကြသူတွေပါ။
မြန်မာ ပြည်သူ တွေရဲ့ အဓိက အသံတွေကို ကြားနေကြရပြီ။ ဒီအသံဟာ သိပ်ကို ကျယ်မယ်
ပြင်းထန်မယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက ရွေးကောက်ခံ ခဲ့ရတဲ့ အမတ် ၄၃ ယောက် ဘယ်ကို
Where the hell are you now? You are still out of country and bark likeadog.
23 May 2012 at 02:21
Are you jealous to that 43 people? They havent yet enter parliment. Why u dont point out 2010 winners.
23 May 2012 at 03:10
If u want to get change,do it urself.
23 May 2012 at 03:40
Where the hell are you right now? If you think those 43 candidates got responsibilities. Why don't you participate in those event? You are out and enjoy with international supports. Earning dollars and support your damn relatives. Don't fuck around.
23 May 2012 at 05:22
မိုးသီး တော်တော်တုံးမှန်း အခုမှ သိတော့တယ်။ အဲဒါ အမတ် ၄၃ ယောက်တာဝန်လား အာဏာပိုင် အစိုးရ တာဝန်လား။ မင်းလဲ Myanmar Express ကောင်တွေနဲ့ဘာမှမထူးဘူး
23 May 2012 at 08:46
Hey, Son of bitch Moe Thee Zon!
Say your step father Government about that.
23 May 2012 at 09:43
အမတ် ၄၃ ယောက်လား ။ English speaking လေ.ကျင်.နေတယ်လေဗျာ ။ အနောက်နိုင်ငံ က လူကြီး တွေ လာရင် ဖားနိုင်အောင် ။ ပြောနိုင်အောင် ။လိုအပ်တဲ. အကူအညီတွေတောင်းနိုင်အောင် ။သူတို.တက်တဲ.အချိန်အထိ နိုင်ငံတကာက စီးပွားရေးပိတ်ဆို.နိုင်အောင်။ အန်လယ်ဒီဆိုတာ အရေးကြီးရင် မဲလိုချင်မှသာ အပြောကောင်းကောင်းနဲ. ပြည်သူ.အတွက် ဘာအတွက် ညာအတွက် ဖောမယ်။ ဒါပဲတတ်တယ်လေ။ အန်လယ်ဒီကို အားကိုးနေသရွေ. ။ လက်ရှိစနစ်ကို မတိုက်ထုတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံး ကွုန်တော်တို.တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး သူများ အောက်ကျနေမှာပဲ။။ စစ်အုပ်စု ကြောင်. တရုတ်ကြောက် ကျွန်ဖြစ်နေရတယ်. အန်လယ်ဒီကြောင်.လဲ အနောက်အုပ်စုရဲ. ကျွန်ပဲ ဖြစ်မှာပဲ ။။ ပြည်သူတွေအနေနဲ. ကိုယ်.အခွင်.အရေးအတွက် . ကိုယ်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက် ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူမှပဲ ရပါလိမ်.မယ်. အဲလို.လုပ်ယူတဲ.နေရာမှာ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား(ကိုမင်းကိုနုိုင်)တို.အုပ်စုကိုပဲ အားကိုးရပါလိမ်.မယ်. အပြောမဟုတ် လက်တွေ.လုပ်နိုင်တာဆိုလို. ။ ပြည်သူနဲ. တသားတည်း ပြည်သူတွေရဲ. ဘ၀ကို လက်တွေ.သိတာဆိုလို. သူတို.ပဲ ရှိတာလေ...
23 May 2012 at 10:19
မင်းတို့ကလဲ နေတော့ နိုင်ငံခြား မှာ၊ ပြီးရင် ဟိုဟာလုပ်ပါလား၊ ဘယ်သူတွေတော့ ဘယ်လို၊ ဘေးထိုင် ဘိုင်ပြော တာတော့ တော်တယ်။ အေးအေး ဆေးဆေး ဆူရှီ လိတ် ကျ စမ်းပါကွာ။
23 May 2012 at 10:34
Last time was the great moment but you can't just leave it yet. thing about the belonging and worry about the happening.
Ps: May be you are no longer belong to the that country that you loved (Said by no one, of course not that's ko moe thee)
25 May 2012 at 02:48
25 May 2012 at 23:56
အင်း မီး မီး မီး
အမတ်တွေက ( E P C ) ဟုတ်ဘူးလေဗျာ
ပြောချင်ရင်လည်း စဉ်းစားပြီးမှ ပြောပါနော်
26 May 2012 at 09:24
မီး ၁၁+လျှပ်စစ်မီး=၁၂ မီးငြိမ်းပါစေ
အမတ်တွေက (EPC) မဟုတ်ဘူးလေဗျာ
ခင်ဗျားက ကြံ့ဖွတ် ကထင်တယ် ဘောပဲ
26 May 2012 at 09:28